Adiga ayaa go'aan ka gaara tattoo? | LIFE PICKER - 2018
Adiga ayaa go'aan ka gaara tattoo?
Weligaa ma ku riyootay inaad hesho tattoo? Haa, si daacad ah, tani ma aha hawl fudud. Oo ma aha nidaam xanuun leh. way ogyihiin hubaal. Waxa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo mishiinnada asaasiga ah. Waxay ka shaqeeyeen mishiinka ka timaha qallajiyayaasha iyo xiiranaha korontada. Halkii halkii laga rabi lahaa cirbadaha marmarka qaarkood waxaa loo isticmaalaa xargaha guitar. Muddo dheer ayey jirtay. Qalabka casriga ah wuxuu maqaarka maqaarka hal mar ka mid ah irbadda. Qalabka waxaa diyaariya mastarada oo la wada shaqeeya dhakhtarka maqaarka. Noocyada qaliinka waxaa loo qaabeyn karaa si shakhsi ahaan ah macmiil kasta. Cirbadaha casriga ah waa kuwo la tuuri karo. Waxay ka samaysan yihiin birta qalliin. Guud ahaan, xanuunku ma cabsan karo. U baahan tahay inaad ka fikirto wax kale. Miyaa loo baahan yahay tattooing? Xagee ayay tahay inay caqabad ku noqoto? Miyaad ka qoomameyneysaa goor dambe? In ka badan inta aan la samayn wax ka wanaagsan. Ma jiro shaki yar. Dabcan, tattoo ayaa laga saari karaa. Laakiin! Xitaa haddii aad, aad bixisay lacag badan, waxaad u keeni doontaa tattoo hoos, maqaarka maqaarka on goobta of tattoo sawir ma noqon doonaa isku mid ah. Marka la eego, xargaha qaar, sida buluug iyo cagaar, way adag tahay in la saaro.
Haddii niyadda, sida ay yiraahdaan, dagaal - sii soco! Si kastaba ha noqotee, hubi inaad ogaatid qodobbada soo socda.
Haddii aadan si buuxda u go'aansanin xulashada meel ka mid ah jirkaaga, ku dhaji tattoo fara badan meelo kala duwan oo arag haddii ay ku dhibayso.
Waligaa ha samaynin tattoo xilliga qalalaasaha, sidaa daraadeed ma qoomamee oo qalad ku samee xulashada sawir.
Xusuuso xajiinta xayawaanka. Waxay noqon kartaa mid aan la saadaalin karin. Dadka kala duwan midabada maqaarka ayaa ku dhaqmi kara si kala duwan.
Had iyo jeer weydii shahaadooyinka asaasiga ah ee ku haboon dharka, iyo sidoo kale oggalaansho aad ku isticmaasho dalka.
Wax yar oo ku saabsan meelaha. Waxaa jiri doona, dabcan, ma ahan xanuunka duurjoogta ah, laakiin xanuunka kiis kasta wuxuu joogi doonaa inta lagu gudajiro nidaamka. Sidaa darteed, doorashada goobta waa mid aad muhiim u ah. Masters waxay isku raaceen in meesha ugu xanuunsan ee tattoo ay tahay dhinaca sare ee garbaha iyo dhabarka dambe ee u dhaw garbaha.
Dhabarka dambe ee gudaha iyo kilkilooyinka, sawirku waa xanuun. Waxaa jira qanjidhada qanjirada iyo dhirbaaxo badan.
Goobaha xanuunku waxay sidoo kale ka mid yihiin cagaha, curcurka, gacmaha, laabta, qoorta, dhinacyada, iyo caloosha.
Tattoo ku yaal badhida ayaa sidoo kale keeni kara in badan oo qallafsan oo qallafsan.
Way adagtahay in la sameeyo tattoo cagihiisa. Maqaarku waa dhuuban yahay, badanaaba qalalan. Tattoo-ga wuxuu awoodaa inuu "xirto" wakhti dheer oo uu la socdo corneum qalafsan.
Maqaarka oo aad u sarreeya ayaa ka dambeeya dhegaha iyo dhinaca hore ee jirka. Haddii wax qaldamaan, tattoogu waxay u ekaan doontaa meel aan wasaq lahayn oo aanad awoodin inaad qariso.
U hubso inaad fiiriso xaaladda maqaarka.
Ka hor kulanka, hubso in aad cuntid. U hubso inaad cunto wax macaan, si aad u seexato jirka.
Cab cabto xanuun.
Xusuuso! Qaadashada khamriga ka hor inta aan la gaarin fadhiga ayaa si gooni u ah. Iyada oo saameyn ku yeelata isbedelka wareegga dhiigga. Xiliga shaqadeeda waxa ay ka soo bixi kartaa wax ka badan sidii caadiga ahayd, iyo natiijada, rinjiga waa la dhaqayaa.
Ka dib markaad isticmaasho tattoo, sidan samee: saabuun aan bakteeriyada la socdo iyada saddex jeer maalintii. Ka fogow "kuleyleyaasha microbial": barkadaha, saunas, jimicsiyada. Ha xiirin agagaarka tattoo ha ku rinjirin.
Ka dhig tattoo uun oo kaliya ayaa kuu rajeynaya shakhsiyaadkaaga!
Sidee noloshaadu isbeddeli doontaa kadib helitaanka cagaarshow C
Rugta qalliinka ee qalliinka ee Almaty iyo Astana - heer sare oo adeeg ah, wax ku ool, hubin tayo leh
Waa maxay fuuq-dhiska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay?
Maxay muhiim u tahay in la fuliyo sahaminta injineernimada inta aan la bilaabin naqshadeynta?
Dhibaatada Burberry: 10% ee tigidhada caanka ah ee dhow